Ileta evulekileyo eya ku @Jack malunga neTwitter | Martech Zone
Kunyaka ngoku, bendiqhula ukuba i-Twitter ifana nentombazana endandiyithanda esikolweni eyayingayi kundinika ixesha losuku. Ngesinye isikhathi sasidlala ukujikeleza ibhotile kwigumbi elingaphantsi, kwaye wakrweca ibhotile ukuze amange umfana owayekufutshane nam owayeyinjonge. Wayophula intliziyo yam. Kwaye waqhekeza eyakhe. Saphulukana sobabini. I-Twitter iyalahleka, nayo.
Ubhale kwi umnxeba wakho womvuzo:
Kuyasivuyisa ukunika ingxelo yokuba ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kukhawulezisiwe kwikota yesi-3 ngokulandelelana, kwaye siyabona ukuba ukukhula okuqinileyo kuyaqhubeka.
Andiqinisekanga ukuba ngubani We kunjalo, kodwa ndaliva ixesha ukusetyenziswa okusebenzayo kwemihla ngemihla kuyakhawuleziswa, Ndalila inyembezi. Uphuza ijezi. Kwaye iyanya kuba ibindim othanda wena.
Awuyi ngosuku ungakhange uve nge-Twitter.
Ngelixa kuyinyani, masinyaniseke omnye komnye. Kungenxa yokuba ikota tweeted yandulelwe ligama uDonald Trump ngaphezulu konyaka ngoku.
Lo mfo ungamkhathalelanga kangako sesona sizathu sokuba uninzi lwabantu luve nge-Twitter kuwo wonke unyaka ophelileyo. Kwaye kubonakala ukuba kuya kuqhubeka kulo nyaka. Akunasipho esiza kuzisa i-Twitter kubuqaqawuli bayo bangaphambili.
Ndisebenza kumzi mveliso we-Intanethi ukusukela oko kwaqalwa kunye nentengiso yesiko ngaphambi koko. Ndijonge njengoko amaphephandaba azibulalayo, engayikhathalelanga italente yobuntatheli ebaxabisayo abafundi kwaye bayithengisela ama-eyeballs kunye namakhuphoni. Bathandana nale jerk.
Ndenze uphando olukhutheleyo kwaye ndibonelela ngeengcebiso ze-SaaS ngaphezulu kwe- $ 3 yezigidigidi kutyalo-mali kunye nokufunyanwa. Ndixele kwangaphambili (njengoko abanye besenza) ukusweleka kwecala elingwevu kwishishini lokukhangela. Ndayinxalenye yokuqala yokukhula kwe-ExactTarget kwaye ndanceda ukuqala enye inkampani eyayithengisa kwi-Oracle. Ndibhala ngeTekhnoloji yeNtengiso mihla le. Ndiyajikeleza.
Kwaye ndiyayithanda iTwitter… nangona engandimameli.
Ndikholelwa Njani kuTwitter onokuthi ajike ajikeleze… ngokukhawuleza
Masitsibe ngqo kwinqanaba. Ndiyakhathazeka kwi-Twitter kuba ndicinga ukuba ingxaki inzima kakhulu kunokuba uyenza. Kwaye kuba ndiyakholelwa ukuba uthandile ngamanani akhulayo- ijezi-ekhokelela ekuzibulaleni kwakho.
Amava e-Twitter ayesetyenziselwa ukufumanisa okungakholelekiyo komntu omangalisayo, uphawu, okanye ubuhlakani obupakishwe ngoonobumba abali-140. Amava ngoku kufana nokuzama ukuba nencoko kwi umngxuma omkhulu we-mosh kwiplanethi. (Bendihlala ndifuna ukusebenzisa igama elithi mosh pit kwinqaku).
Ingxolo ku-Twitter ayinakuphela… kwaye ubhiyozela ulonyuso kwi ukusetyenziswa okusebenzayo.
Nantsi into endinokuyincoma kwangoko:
Vimba ukuphinda iiTweets. Yeka ubuhlanya. Kwiakhawunti yam ye-Twitter, akufuneki ndivunyelwe ukuphinda i-tweet efanayo ixesha elithile ngaphandle kokuba ndihlawula ukukhuthaza iTwitter. Kutheni ndingakuhlawula xa ndinokuvele ndikhuphe i-echo usuku nosuku? Inqaku: Andikubhatali.
Intlawulo ye API lokusebenzisa Ngokushicilelwa kwe-tweet. Akunyanzelekanga ukuba ibe ninzi… kodwa njengomshicileli, ndingakuvuyela ukuhlawula umrhumo wenyanga apho ndinokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo izilumkiso zam malunga namanqaku am ukuze abalandeli bam baphendule. Abagaxekile abayi kuyenza. Baza kuhamba.
Ukuhlawulisa ukusetyenziswa kwe #ad nge-tweet epapashiweyo. Izigidi zeedola zihamba ngeqonga lakho yonke imihla awenzi mali. Ngokuqinisekileyo, abahlobo bam baya kundithiya ngokucebisa oku, kodwa ndizama ukukunceda-hayi bona. Iya kunciphisa ukucela, kwaye sinokuhlala sibhloka okanye sikhabe abagibeli abathandayo ngaphandle kokumakisha.
Yongeza Khetha ukungena ngqo kwiMiyalezo. Andikwazi kwaye andizukujonga ii-DMs zam njengoko zingaphandle kolawulo. Andinalwazi lokuba ndiqale ngaphi kodwa ngendilithandile ithuba lokuvumela abanye abasebenzisi ukuba bathethe nam ngasese. Okwangoku zixutywe namawaka eminye imiyalezo kwaye andivumi ukuzijonga.
Yeka ukundithumela ii-imeyile ukuba ndizilandele Inkcubeko yePop Iiakhawunti ze-Twitter ezingabalulekanga kwaphela kum. Ukuba ubundimamele (umz. Ujonge endinxibelelana naye), uyazi ukuba uKhan West kunye noJustin Bieber ngabantu endingenamdla kubo. Ngelixa ucinga ngawe njenge-TMZ yentlalo, ayisosizathu sokuba ndikusebenzise… kwaye hayi ukuba izigidi zabanye zikusebenzisa njani.
Ukwahlula Iimpawu ezivela kuBantu. Akukho mfuneko yokuba kubekho umahluko omkhulu, kodwa iya kuba yinto emangalisayo ukuba ndingaxelela umahluko. Ndingacoca kwaye ndahlule ukutya kwam phakathi kweencoko zam kunye nezobuchwephesha.
Yamkela ukuba ngu Isiteshi seNkonzo yaBathengi. Izigidi zezikhalazo kunye nokuphononongwa kudlula kwiqonga lakho yonke imihla kwaye zihambela kwimibutho ethenga izixhobo zokujonga imidiya yoluntu ukuzibamba. Kutheni le nto unganiki izixhobo zoku? Kutheni le nto i-Twitter ingakhuphi ikhaphethi kwii-apps zomntu wesithathu kwaye uzenzele ngokwakho? Ndingathanda ibhotile yokuphononongwa kwindawo yam enokundimakisha kunye nokupapasha kwi-Twitter ukuze ibonwe lihlabathi. Ndingathanda ukukubona unikezela uluvo kunye nohlolo ngokuzenzekelayo njengenxalenye yeprofayile yohlobo.
Nceda ulungise eyakho uphando lwangaphakathi kwaye ukugqiba ngokuzenzekelayo ukuchaneka. Endinokuzisebenzisa Indawo: twitter.com ukukhangela kuGoogle ukufumana abantu kwi-Twitter akunangqondo.
Apho unayo, uJack. Ndiyathemba ngokunyanisekileyo ukuba i-Twitter ayizukunamathela kuloo jerk eqhubeka ephuza emathekweni. Khaba ukusetyenziswa kwejezi kwaye wamkele ukubandakanyeka. Uthando lwenene lwe-Twitter luhleli apha lilindile.
Ndibize… Nditsalele umnxeba. 😉
tags: uDonald trumpjackjack dorseytrumpixilongo kwi-twitterweposiTwitter